Mpivarotra sy mpamatsy HV-87 mpivarotra rivotra mahery vaika ao Shina Hengrong
kitapo be rivotra misy rivotra-HV-87
Ny kitapo feno rivotra dia vita amin'ny takelaka misy rivotra ary miorina amin'ny fitehirizana ny ankamaroan'ny vatan-kazo sy kitay, ny harato-bolon'izy ireo dia ampiasaina hanodinana ny fikorianan'ny rivotra, hanafainganana ny fizarana ny fanamainana sy ny fanamainana.
Ventilated ampahany Ny kitapo dia vita amin'ny takelaka misy rivotra ary ny fotony ampiasaina indrindra amin'ny fitehirizana ny ankamaroan'ny vatan-kazo sy kitay, ny harato-bolon'izy ireo dia ampiasaina hanodinana ny fivezivezin'ny rivotra, hanafaingana ny fampiroboroboana ny fizarana sy ny fanamainana. Izy ireo dia mety amin'ny vokatra mila miaina. Ny tadivavarana efatra an'ny kitapo dia azo entina mora foana ho an'ny kamio forklift ary ny tahony eo am-pototry ny kitapo dia mety amin'ny vokatra foana.
● Ho an'ny kitapo misy kitay entona, ny harato dia tsara amin'ny fivezivezin'ny rivotra hiarovana ny loko sy ny toetran'ny hazo mandritra ny fitehirizana. Ny famolavolana fofonaina tokana dia mamela ny ala hanarona haingana araka izay azo atao mandritra ny fizotra maina. Ary io no vahaolana lafo indrindra amin'ny fanamainana, fitehirizana ary fitaterana kitay.
● Misy rivotra ampahany kitapo no malaza ampiasaina ao amin'ny Kanada ho an'ny fitehirizana sy fitaterana ny ankamaroan'ny vokatra. Izy ireo koa dia manome tsena tsara kokoa amin'ny indostrian'ny hazo. Izy ireo dia mahazo tombony amin'ny vokatra azo amin'ny miaina sy mifanaraka amin'ny fitehirizana sy ny fitaterana mba tsy hamerenana alohan'ny hamerenany indray ny hazo maina anao.
kitapo lehibe misy rivotra
tsy misy ANARANA famaritana DIMENTION Qty
1 U type Virijiny 100% PP Ventilated 170gsm ， 90x90x140cm 1
2 Patch 2 Virijiny 100% PP Ventilated 170gsm ， W = 90cm L = 90cm 2
3 ambony duffle pp harato 40g / ㎡ ， W = 90cm L = 80cm 1
4 fehin-kibo PP ， L = 120cm 1
5 fehikibo fehikibo 40g / m W = 7cm 4
6 spout ambany PE 90g / ㎡ ， mifono Φ45x50cm 1
7 fanononana T = 200micron W = 90cm L = 80cm 1
1 miaraka amin'ny UV （2%） Notsaboina amin'ny loko fotsy BAG
2 Fehikibo mitaingina 7cm fotsy fehikibo fanjairana manjaitra feno
Fonosana Paleta na bales
40HQ 10000PCS amin'ny 40HQ:
Fomba fanaovana: karazana toradroa, duffle ambony, spout ambany, fehikibo manandrana antsasaky ny vatana dia 100cm, loko fotsy, voatsabo UV
Anarana Kitapo marobe mihodina rivotra HV-87
lafiny 90 * 90 * 140cm
hakitroky 13 * 14/14 * 14/14 * 15
karazana lamba 4 tontonana / U + 2panel
fehin-kibo Seam lafiny 4
antontan-taratasy Hidin-toerana mahazatra A4 eo afovoany
Liner PE tsy misy
stitich iraisana + amin'ny fanjairana hidin-trano + doube clain /
Fomba fanaovana fomba fanaovana: U +2 ， fehikibo manainga amin'ny vatana dia 90cm, fehikibo ambony (zipo), spout ambany, antontan-taratasy 1, noho ny zaitra mihidy, voatsabo UV
fampiasana tongolo, ovy, pecan, karaoty, Radis, Kobay, fambolena kitay sns.
Teo aloha: Kitapo marobe misavoana HV62
Manaraka: Kitapo marobe momba ny tubular Double HT-46
U + 2 Kitapo Bulk tontonana HU-15
UV voadidy kalitao lamba avo tadivavarana malefaka s ...
Kitapo feno fehikibo feno HF-9
Kitapo feno fehikibo feno HF-11